Noho ny hetsibahoaka, voatery nosintonin’ny governemanta ao Trinidad & Tobago ilay volavolam-panitsiana ny lalàna momba ny Fahalalahana Hahazo Torohay / Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Hoy ireo mpanakiana: fanitsiana 'tsy ara-demaokratika' ary 'dingana mankamin'ny fihemorana'
Voadika ny 20 Jona 2019 6:19 GMT
Pikantsary avy amin'ny PDF misy ny Lalànan'ny Fahalalahana hahazo torohay/vaovao ao Trinidad sy Tobago, 1999
Noho ny tsindry avy amin'ny vahoaka, nosintonin'ny governemantan'i Trinidad sy Tobago tamin'ny alin'ny 17 Jona teo ilay volavolam-panitsiana niteraka resabe narosony hatao amin'ny lalàna momba ny Fahalalahana mahazo torohay (FOIA) ao amin'ny firenena.
Ilay lalàna, lany tamin'ny 1999 sy nihatra nanomboka tamin'ny 2001, dia manome fahafahana ho an'ny daholobe hangataka fidirana amin'ireo torohay sy vaovao any am-pelatanan'ireo manampahefana. Ireo mpangataka mametraka ny fangatahany FOIA dia heverina fa tokony hahazo valiny ao anatin'ny 30 andro.
Kanefa, tany ampiandohan'ny volana Jona, nanolotry ny governemanta ny fanitsiana iray hatao amin'ilay lalàna, izay mety hampitombo ny fetrandro ara-dalàna ho lasa 90 andro, niteraka hiakiaka avy aminà vondrona maherin'ny 47, isan'izany ny Fikambanan'ny Lalàna, ny Antenimieran'ny Varotra, ary ny Fikambanan'ireo Media ao Trinidad sy Tobago (MATT), izay nanao vovonana iray momba ilay olana, tamin'ny 15 Jona. Marobe ireo mpiaraka miombona antoka sy fikambanana sivily no nino hoe mety hanohintohina ny asan'ireo gazety tsy miankina ilay fanitsiana naroso, ary koa hanakana ny vahoaka tsy hazo vaovao / torohay amin'iny fotoana tokony hilazana azy.
Ny filohan'i MATT, Sheila Rampersad, nohadihadiana tao amin'ny fahitalavitra ny ampitson'ilay fisintonana, dia nanambara fa:
“Maraina iray tokony tena hireharehan'ny vahoaka ny fananany an'i Trinidad sy Tobago ary koa tena hireharehany ny fananany demaokrasia izay hita mibaribary hoe salama tsara— hoe nalaky tonga niaraka sy araka ny tokony ho izy ireo fikambanana sivily, ary dia namaly tamin'ny fomba feno sy ampy tokoa ny governemanta.”
Fanitsiana voafelaka ho tsy “ara-demaokratika” sy “mampihemotra”
Ny fanitsiana ilay lalàna, antsona hoe Toko faha-7, no nandrafitra ny ampahany omnibus iray antsoina hoe Ireo Volavolanà Fehezandalàna Samihafa (Fanomezandàlana tsy handoa hetra, Solon-tsakafo, Fahalalahana hahazo vaovao/torohay, Fiantohana nasionaly, Banky Foibe sy ireo Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakàna), 2019. Ilay vakiraoka tany ampiandohany dia tsy hoe fotsiny nanitatra ny fotoana 30 andro hamalian'ireo masoivohom-panjakana ny fangatahana ho lasa 90 andro, fa koa nanolotra 90 andro hafa fanampiny ho an'ny lehiben'ny fampanoavana mba hanekena na hanafoanana ny fanapahankevitra handà ilay fangatahana.
Amin'ny fampiharana, ny fepotoana natao hamaliana ny fangatahana ao amin'ny FOIA dia matetika no lava kokoa noho fepotoana voatondron'ny lalàna, ary ny sasany amin'ireo masoivohom-panjakana no mandà tsy hanome vaovao, amin'ny fitanisàna ny resaka tsiambaratelo. Matetika tafiditra anatina fanenjehana ny governemanta rehefa misy fandàvana fangatahana atao amin'ny FOIA, ka ny sasany amin'ireo mpanenjika dia mitondra ny raharahan-dry zareo eo anatrehan'ny Vaomiera ara-pitsaràna an'ny Filankevitra Sivily, fitsaràna ambony indrindra fampakarana didy sivily ao Trinidad sy Tobago.
Ramesh Lawrence Maharaj, efa lehiben'ny fampanoavana fahiny, ary nandrafitra ny dika voalohany tamin'ilay lalàna, nandà mafy nanohitra ilay lehiben'ny fampanoavana amperinasa (voatendry ara-politika) no manana ny teny farany momba ny holavina sa tsia ny fangatahana iray, niantso azy io ho “tsy ara-demaokratika.” Maharaj aza nanosoka hevitra hoe mety hampiditra fanenjehana eny anatrehan'ny fitsaràna sy hanomboka fanentanana iray raha ilaina mba handresena lahatra hanaovana fakàna hevitry ny vahoaka momba ilay olana.
Tafiditra ao anaty lahadiniky ny parlemanta amin'ny 10 Jona ilay fanitsiana. Niaiky i Faris Al Rawi, lehiben'ny fampanoavana, fa diso fitsara an'ilay valinteny izy, saingy nahiliny kosa ny filàna fakana hevitry ny vahoaka momba ilay fanitsiana, izay niadiana hevitra sy nolaniana tany amin'ny antenimiera mpanao lalàna tamin'ny 14 Jona sy 15 Jona.
Michael Rooplal, mpisolovava ao amin'ny Fikambanamben'ireo Mpisolovava avy any Atsimo, niantso ilay fanitsiana ho “dingana iray mankamin'ny fihemorana,” tamin'ny fanamarihana fa tsy misy dikany ny hanaovana fanovàna tahaka izany ao anatinà fotoana iray izay hamorain'ny teknolojia nomerika ny fitahirizana, fakàna indray ary fandaminana ny vaovao. Nampian'i Rooplal fa:
“Ny FOIA dia singa fototra iray ao anatin'ny zon'ny daholobe hahafantatra sy zo handray anjara amin'ny fitantanana ny fiarahamonina demaokratikantsika. Tokony harovana tsara izay rehetra fanafoanana ireny zo ireny, indrindra fa ao anatin'izao toedraharaha ankehitriny izao, izay tsy nisy velively fakàna ny hevitry ny daholobe momba io olana io.”